Safari yekuwedzera kunze kweMac App Store inomira kushanda mu macOS Catalina | Ndinobva mac
Safari yekuwedzera kunze kweMac App Store inomira kushanda paMacOS Catalina
Apple yakaita sarudzo payakaburitsa OS X El Capitan. Parizvino Safari inotsigira bhurawuza rako rekuwedzera, ese ari maviri akaburitswa muMac App Store, uye nekuwedzeredzwa uko vanogadzira vanogovera kuburikidza newebhusaiti yavo. Zvekuchengetedza uye kutendeseka matanho eMac anoshanda system, kambani yakazivisa kuti chete mawedzero anotorwa kuburikidza neMac App Store ndiwo achange achishanda.
Tichagamuchira munguva pfupi Safari 13, zvirokwazvo nekubuda kwe macOS Catalina, uye isu tichaona kuti iyo yekuwedzera yakadzvanywa kunze kweMac App Store haishande, asi kuwedzera kumwe chete kunoita kana tikachiisa kubva ku Mac App Store.
Apple inoona kuvimbika kweichi chiwedzero nechiyero ichi uye tinodzivirira kuiswa kwemarware mune yedu system. Dambudziko rinowanikwa kana chiwedzero chinouya "segurovhosi" chisipo, kubvira iye anovandudza haana kuitisa. Uye zvakare, kunze kwekunge isu taita nevanogadzira, isu hatizomboziva kana iwe uri kushanda pane iyo vhezheni yeSafari 13, mukati meMac App Store.
Vamwe vanogadzira vanogona kwete kufarira kuchinjika yezvakawedzerwa. Zvakare, hazvisi zvekufambisa kuwedzera kubva kune imwe saiti kuenda kune imwe. Chinja mutauro uye nzira yekuchengetedza, kugadzirisa, mune ino kesi, neaya akaiswa naApple. Kune rimwe divi, kutsikisa mu Mac App Store kunoda kunyoreswa mu Yekuvandudza Chirongwa. Izvi zvinokumanikidza kuti uwane purofiti kubva kuchikumbiro, zvirinani kuvhara mari yekunyorera kuchirongwa, inova $ 99 pagore.
Zvakare, pane sisitimu yakagadziridzwa seMacOS, kudiwa kwekuwedzeredzwa kwebrowser kushoma. Naizvozvo, zvinotarisirwa hauna kudiwa kwakawanda, iyo inomiririra imwe yekuwedzera chipingamupinyi kune anovandudza. Nhasi izvo zvinowedzerwa nechakanyanya kudiwa zvine chekuita nevanovharira. Ipapo isu tinowana zvinowedzerwa senge Homwe, kune inotevera kubvunza kwewebhu kana CamelCamelCamel, kutevera mitengo yeAmazon, iyo nhasi isina rutsigiro rwayo muMac App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Safari yekuwedzera kunze kweMac App Store inomira kushanda paMacOS Catalina
Iyo itsva Apple patent inoratidza isu mabhanhire ane biometric chitupa
Mutsva makuhwa anonongedzera kune itsva Apple TV yaGunyana 10